Izivumelwano ezine | Martech Zone
NgoMvulo, Juni 4, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngokuhlwanje bendincokola nomhlobo wam, Jules. UJules udlulise ubulumko kwincwadi, Izivumelwano ezine, nguDon Miguel Ruiz kunye noDon Jose Luis Ruiz.
Njengakwezona ngcebiso, yinto entle esisiseko, kodwa kunzima ukuyenza. Ubomi bethu bemihla ngemihla kubonakala ngathi buhambisa amandla ethu okugcina izinto ezinje ngale nto iphambili engqondweni. Mhlawumbi kuba zine kuphela, sinokuyiphumeza, nangona kunjalo!
1. Yiba ngongenakulinganiswa NgeLizwi Lakho
Thetha ngentembeko. Thetha kuphela into oyithethayo. Kuphephe ukusebenzisa igama ukuthetha ngokuchasene nawe okanye ukuhleba ngabanye. Sebenzisa amandla elizwi lakho kwicala lenyaniso nothando.
2. Musa ukuthatha nantoni na
Akukho nto abanye abayenzayo kungenxa yakho. Oko abanye bakuthethayo nabakwenzayo yingqikelelo yobunyani babo, amaphupha abo. Xa ukhuselekile kwizimvo nakwizenzo zabanye, awuyi kuba lixhoba lokubandezeleka ngokungeyomfuneko.
Fumana isibindi sokubuza imibuzo kwaye uchaze eyona nto uyifunayo. Nxibelelana nabanye ngokucacileyo njengoko kunokwenzeka ukunqanda ukungaqondani, usizi kunye nomdlalo weqonga. Ngalesi sivumelwano sinye, ungabuguqula ngokupheleleyo ubomi bakho.
4. Soloko usenza konke okusemandleni akho
Okusemandleni akho kuya kutshintsha ukusuka kumzuzu ukuya kumzuzu; iyakwahluka xa usempilweni ngokuchasene nokugula. Ngaphantsi kwayo nayiphi na imeko, yenza konke okusemandleni akho, kwaye uya kuthintela ukugweba, ukuzenzakalisa nokuzisola.
Ingcebiso entle. Ndicinga ukuba ndine # 1 ezantsi, # 4 phantse phaya… # 2 Ndilungile, kuba ndizithembile. # 3 ifuna umsebenzi othile! Enkosi kuJules ngokudlulisa oku! Ndinomsebenzi ekufuneka ndiwenzile.
Nditsalele umnxeba xa uphumile kwiBeta, uGiya kaGoogle!
Jun 5, 2007 ngo-6:29 AM
Ingcebiso ebalaseleyo, Doug. Uninzi lweengcebiso zokuziphatha zilula, kwaye njengoko usitsho, kunzima.
Jun 5, 2007 ngo-7:20 AM
UDoug. Ivakala ngathi yincwadi enomdla. Ngaba uyifundile wayigqiba? Lixabisa ixabiso lokwamkelwa okanye ushwankathele amatye anqabileyo alapha kwiposti yakho?
Iimpawu ezine ngokuqinisekileyo ekufuneka sizame ukuya kuzo. Kwaye, nxibelelana ngokuthe ngqo nokubhloga.
Jun 5, 2007 ngo-8:05 AM
Ndiyifunde le ncwadi amatyeli aliqela kwaye yayibubomi obutshintsha okokuqala, ubomi buqinisekisa ngalo lonke ixesha. Ngelixa imigaqo ilula, ukwenza ngokwenene (nzulu) kubomi bethu bobuqu kunye nobuchwephesha kuthatha uqeqesho kunye nomnqweno oqhubekayo wokuziphucula. Ngoku, ngelixa ngokuqinisekileyo ndikhathazeke ngakumbi ngecala lobuqu kwaye le bhlog yeedilesi zikaDoug kwicala lobugcisa / lobuchwephesha bobomi, isangqa sethu sempembelelo sikhulu njengoko sifuna ukuba njalo. Izivumelwano ezine zandiswe ngaphakathi kwincwadi kwaye icacisa intsingiselo enzulu ngakumbi kwisivumelwano ngasinye.
Ukuqala kwencwadi kutsala kancinci, kodwa nje ukuba ingene “kwinyama” yayo, ndiye ndaguqulwa…kwaye ndatshintshwa. Ukuba wonke umntu ebenokuyisebenzisa le migaqo, thina babeya ukutshintsha ihlabathi.
Jun 5, 2007 ngo-8:32 AM
Ngokuqinisekileyo ikuluhlu lwam olufutshane lweencwadi zokufunda, Dawud! Khange ndicinge ngokubhloga (duh!), kodwa uchanekile- licebiso elihle kwiibhlogi!
Juni 5, 2007 ngo-5: 23 PM
hmm….mhlawumbi kuya kufuneka ndisebenze nzima kwinqaku # 2 🙁
Juni 5, 2007 ngo-9: 25 PM
Kuyinyani ukuba oku kunzima kakhulu. Kusenokukunceda ukucinga ngale ndlela. Akukho mntu unokukwenza nantoni na ongeyiyo. Ke, ukuba undibiza ngamagama okanye undixelele into embi ngesiqu sam, akufanelekanga ukuba nanxaxheba kwindlela endizijonga ngayo – UKUBA ndikhuselekile emntwini wam. Ilapho ke ingxaki. Sivumela imbono yabanye ngathi ukuba iphembelele indlela esizijonga ngayo, kunokuba sizamkele nje thina okanye sitshintshe izinto esingazithandiyo ngokulula b/c esifuna ukuzenza. Into oyikholelwayo idla ngokufezekiswa. Cinga ngezinto ezakhayo ngawe kwaye uya kuzithanda; cinga izinto ezimbi kwaye awuyi kuzithanda wena.
Ewe, ndityholwa ngokuba nguPollyanna'ish……kodwa sisikhokhelo ebomini bam kwaye yeyona nto indisebenzela kakuhle, ngakumbi namhlanje. 🙂
Jun 6, 2007 ngo-4:18 AM
ingcebiso enkulu Jule 🙂
ndibulela kakhulu !
Ukuthetha izinto ezimbi kwi-intanethi kulula. Chwetheza nje kuyo nantoni na oyifunayo kwibhokisi yezimvo ....
Abantu abacingi nokuba inokuba yintoni impembelelo enokuba nayo kwiblogger…. 🙁
“Cinga izinto ezintle ngawe yaye uya kuzithanda; cinga izinto ezingakhiyo kwaye awuzukuzithanda wena.”
Ngokuqinisekileyo ndiza kulandela iingcebiso zakho 🙂
Jun 6, 2007 ngo-7:33 AM
Andikwazi ukuyicebisa ngokwaneleyo le ncwadi – ifundeka lula, kwaye kufanelekile ukuyifunda kwakhona ngamaxesha athile ukuze ubuyisele ingqondo yakho ngokuthe tye. Le ncwadi ndayinikwa kwiminyaka eliqela eyadlulayo xa ndandihamba “kwindawo erhabaxa” kwaye yandinceda ukuba ndiphinde ndibuye. #2 Sukuthatha nantoni na Ngokwam ibe nefuthe elikhulu kum ngokunceda ukuba ndizive ndingumntu.
Iingcebiso ezilungileyo, Doug!
Iintaka zasendle ezingenamkhawulo
NgoJulayi 13, 2007 ngo-1:55 PM
Ngokwenyani ukuba waphula isivumelwano #2 okanye #3 nawe awukho Impekeleka neLizwi Lakho (isivumelwano #1).
Ukuba uthatha into ngokwakho ngoko wenza intetho echasene nesiqu sakho ngokweemvakalelo. Oku asikokuba msulwa. Ukuba wenza (ukudala engqondweni yakho) iingcinga ezikhokelela ekungavisisani ngoko nawe awulunganga.
Ukubonakaliswa kwelizwi lakho ngendlela engafanelekanga kukwafuna ukuba wenze uqikelelo ngokugqibeleleyo, kwaye ungathethi izinto ezikubangela ukuba uzithathele ingqalelo izinto.
Ekuqaleni ukufunda kubonakala ngathi Ukungafezeki kulula kunabanye. Xa ufunda amanqaku angcono ufumanisa ukuba izivumelwano zokuhlala #2,3, kunye ne-4 zikhokelela ekufezekiseni Ukungafezeki.
Iinkcukacha ezithe vetshe malunga noku http://pathwaytohappiness.com/happiness/2007/01/19/be-impeccable-with-your-word/